Duomo ee Florence | Wararka Safarka
Maria | | Getaways Yurub, Italia
Mid ka mid ah macbudyada ugu waaweyn ee ku yaal Kiristendomka waa kaniisada weyn ee loo yaqaan 'Florence Cathedral' oo loo yaqaan 'Duomo' Waxaad u badan tahay inaad ku aragtay sawirro badan iyo hagitaannada safarka maadaama ay astaan ​​u tahay magaaladan Talyaniga ah iyo weji gaar ah iyo qubbad weyn oo aan la garan karin. Si kastaba ha noqotee, waxba lama barbardhigi karo waayo-aragnimada aragtida qof ahaan iyo socodka gudaha iyo hareeraheeda.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Duomo of Florence, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso maxaa yeelay qoraalka xiga waxaan si faahfaahsan uga hadli doonnaa mid ka mid ah mucjisooyinkii farshaxanka Gothic iyo Renaissance-kii ugu horreeyay ee Talyaani. Nagu soo biir!
1 Asalka Duomo ee Florence
2 Cabirka Duomo ee Florence
3 Gudaha Duomo
4 Fuula qubbad
5 Hareeraha Duomo ee Florence
Asalka Duomo ee Florence
Dhismaha Cathedral-ka Santa María del Fiore wuxuu ka bilaabmay 1296 macbudkii hore ee loogu tala galay Santa Reparata, kaasoo aad u yaraaday si loo dajiyo kuwa aaminka ah ee magaalada koraya. Shaqooyinka waxay kubilaabeen jihada Arnolfo di Cambio iyo dhimashadiisa kadib, Guild of Wool Art oo mas'uul ka ahaa xakamaynta shaqooyinka ayaa shaqaaleysiiyay Giotto, oo inta badan mas'uulka ka ahaa munaaradda, ka dibna Francesco Talenti.
Sannadkii 1380 saqafka saddexda xuddun iyo saddexda qaybood ee hore ayaa la dhammaystiray. Horaantii qarnigii XNUMXaad, dhismaha qubbadku wuxuu ku bilaabmay amarro ka soo baxay Filippo Brunelleschi, oo ahaa naqshadeeyihii ugu horreeyay ee Renaissance, kaasoo ay la soo gudboonaatay dhibaatooyin xagga farsamada ah maadaama miisaanka xad-dhaafka ah ee qubbadku uusan taageeri karin dhismooyinka dhaqameed ee ay ku shaqeynayeen. waqtigaas. Sanado badan oo daraasad ah kadib, wuxuu hindisay qaab cusub oo keenay is-taageer isbaheysi labalaab ah.
Qurxinta gudaha ee qubbad ka mid ah Florence Cathedral waxaa fuliyay Giorgio Vasari iyo Federico Zuccari waxayna muuqaallada matalayaan Xukunka Ugu Dambeeya.
Cabirka Duomo ee Florence
Kaniisadda Santa Maria del Fiore ama Duomo waa kaniisadda afraad ee ugu weyn meeraha marka laga yimaado Saint Peter ee Rome, Saint Paul ee London iyo Cathedral of Milan. Dherarkeedu waa 160 mitir, ballaciisuna waa 43 mitir, dhererkiisuna waa 90 mitir. Dhererka gudaha ee cirifka sharaf leh waa 100 mitir iyo 45,5 mitir dhexroor dibadda ah.
Qorshaha iskutallaabta Laatiinka ah iyo seddex dhinac oo ay taageerayaan seddex tiir, Duomo waxaa lagu gartaa miyir-qabkiisa wuxuuna leeyahay dareen faaruq ah oo bannaan. Maaddaama cathedral lagu dhisay lacag dadweyne, qaar ka mid ah walxaha farshaxanka ee kaniisaddan ayaa loogu talagalay dadka sharafta leh iyo hoggaamiyeyaasha millatariga ee Florence.
Inta badan astaamaha qurxinta sida farshaxanada ama qaybaha diinta ee asalka ah waxaa lagu soo bandhigaa Matxafka Opera del Duomo sababo dhowris darteed. markaa waxaa lagu beddelay nuqullo ka dhacay Cathedral, Battistero iyo Campanile. Matxafkan moodooyinka sharraxa iyo qorshooyinka dhismaha Santa Maria di Fiore ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay.
Duomo gudaheeda lama ogola in la booqdo meelaha lagu cibaadeysto laakiin irridda agteeda waxaa marin loogu heli karaa in lagu dhaadhaco meyd yar oo laga helay bartamihii qarnigii XNUMXaad halkaasoo aad ku arki karto qabriga Brunelleschi, qoraaga qubbadda caanka ah ee macbudka iyo taallooyin tiro badan oo qurxin ah. Sharaf weyn, tan iyo wakhtigaas, naqshadaha laguma aasin meydadka.
Fuulitaanka si qubbad ah ee Duomo ah waa arrin waayo-aragnimo ah. Waa inaad maskax ahaan udiyaar garowdaa inaad fuusho in kabadan 450 talaabooyin qaabab iyo noocyo kaladuwan ah oo kala soocaya aragtida iyo wadada. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la helo xoogaa dhiirrigelin ah maaddaama qaybta ugu dambeysa ay u dhowdahay si qumman oo udhaxeysa banaanka iyo hareeraha.
Si kastaba ha noqotee, kuwa doonaya inay ka fekeraan muuqaalka sare ee Florence si ka dabacsan waxay aadi karaan Giotto's Campanile. Labada ikhtiyaarba way ku fiican yihiin ku raaxeysiga farshaxanka qaabkiisa ugu nadiifsan iyo aragtiyo cajaa'ib leh.
Hareeraha Duomo ee Florence
In xarunta taariikhiga ah ee Florence, gaar ahaan aagga ku wareegsan Duomo, waxaa jira matxafyo badan iyo uruurinta si aad u qoyso farshaxanka ugu fiican magaalada.
Dhowr daqiiqo oo laga socdo Duomo waa matxafka Bargello. Shaqooyinka Michelangelo, Donatello iyo Verrocchio ayaa halkan ku yaal, in kasta oo sidoo kale ay jiraan ururinta farshaxanka islaamka iyo keyd.
Xaqiiqda ka dambeysa Cathedral Florence waa Madxafka Opera del Duomo oo leh ururinta muhiimka ah ee shaqooyinka Donatello iyo sidoo kale qaybo kale oo qiimo leh oo ka yimid Duomo, Baptistery iyo Giotto's Campanile.
Si aan wax uga barano cilmiga anthropology, waxaan tagi karnaa Madxafka Qaranka ee Antropolojiyadda iyo Ethnology ee Qasriga Non Finito ee loo maro del Proconsolo.
Meelaha kale ee xiisaha leh ee magaalada waa Palazzo Vecchio oo ku taal Piazza della Signoria. Dhismahan agtiisa wuxuu ku yaal Uffizi Gallery, oo ah mid ka mid ah goobaha dhaqanka ee ugu booqashada badan magaalada Florence, iyadoo la ilaalinayo sawirrada la xiriira sida Dhalashada Venus ee Botticelli ama Cibaadada Magi ee Leonardo da Vinci.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Duomo ee Florence